Zaka tsara | NewsMada
Filaminana maharitra amin’izay…
Hitondra ho amin’ny tena filaminana sy fitoniana maharitra ve izao lalana diavin’ny firenena izao? Ho hita eo… Amin’izao aloha, mandeha ny ankisisika amin’ny fitadiavana sy fiadiana toerana. Governemantan’ny marimaritra iraisana tsinona. Hahay hifandamina ny rehetra amin’ny fitakiana ranolava?
Mba hirosoana amin’ny fifidianana izany, raha izay aloha ny zava-dehibe sy mahamaika amin’izao. Raha tsy izany, misosoka hatrany ny vahiny: hanoro lalana, hibaiko, hanery, hanjakazaka… Eo hatrany ny fanararaotana ny korontana sy ny fahalemena amin’ny toy izao? Na teratany io, na ny vahiny.
Tena hitondra ho amin’ny fanovana sy fiovana àry ve izao lalana diavina izao? Na ho fombafomba ivelany ihany… Mila fanjakana matanjaka, manana ny maha izy azy, mitandro fiandrianam-pirenena… Raha mbola tsy izay no eto, ahina hiverina hatrany ny korontana sy ny krizy politika… mampitroatra vahoaka.